Ny ‘Diwaniya’ ao Koety · Global Voices teny Malagasy
Ny ‘Diwaniya’ ao Koety
Voadika ny 01 Desambra 2018 16:28 GMT
Ramadan Kareem (Ramadany Sambatra) ho an'ny rehetra. Mihetsiketsika i Koety mandritra ny Ramadany amin'ny fivoahana alina miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana mitsidika ireo diwaniyas (toerana fivoriana natokana ho an'ny lehilahy), sy ireo fivoriam-pianakaviana hafa mahatonga anay tsy hanam-potoana amin'ireo olana ara-pôlitika sy maneran-tany.
Noho izany, tsy nipoitra mihitsy tanatin'ireo diwaniyas ny olana momba ny famadihan'i Koety ho ara-dalàna ny fifandraisany amin'Israely. Tsy voaresaka mihitsy izany na mandritra ny fitsidihan'ireo mpikambana anatin'ny Parlemanta aza, tsy mba ho fahalalam-pomba fa toa tsy dia mivaky loha ny amin'io olana io mihitsy ny vahoaka.
Lohahevitra iray mafana resahina foana manodidina ny Ramadany ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra. Manontany i Such as Stallion hoe inona no mafana, ary inona no tsia? Kanefa toa misy fifanarahana manao hoe ataovy ratsy ny fandaharana, fa ataovy tsara kosa ny dokambarotra. Mangataka fanembatsembanana ny fandaharana Gergeegan ao amin'ny fahitalavitra MBC1 i Q sy i Zaydoun ary i Bo Jaij. Izay nahatonga an'i MadM2000 hamerina hanoratra bilaogy mihitsy (rohy maty).
Mizara amintsika ny fihetsehampony marina momba ny Ramadany ihany koa i Ayya, sy ny antony mahatonga azy io ho iray amin'ireo volan'ny fiatsarambelatsihy lehibe indrindra ao anatin'ny alimanàka Silamo.
Nanatanteraka ny Fihaonan'ireo bilaogera ao Koety andiany faha-10 ihany koa izahay.